LASA NATIONAL Channel Park FSX & P3D
Pirenena FSX & P3D HOT
Toerana manodidina tanteraka sary-tena ny National Park Channel Islands (USA) sy San Nicolas Island Naval lavitra Field (KNSI) sy Santa Catalina Islands (KAVX) sy San Clemente (KNUC). Ny toerana manodidina manarona tanteraka ny 9280 toradroa km 3625 + ny taona km ny textures no vahaolana 1m / Pixel, tafiditra tamin'ny 10m résolution harato.
Ny Channel Islands National Park dia US valan-javaboary izay mahafaoka dimy ny valo nosy ao amin'ny Channel Nosy saikanosy any amin'ny Oseana Pasifika eny California. Antsasaky ny kianja dia anaty rano. Ny nosy mandry ao amin'ny valan-javaboary mihinjitra amoron-tsiraka ny Southern California Point Conception akaikin'i Santa Barbara an'i San Clemente Island, atsimo-andrefana ny Los Angeles. Ny foiben'ny ny zaridaina sy ny vahiny foibe Robert J. Lagomarsino dia hita tao an-tanànan'i Ventura.
Ny Channel Islands National Park dia ny an-trano ny lehibe sy maro samihafa ny voajanahary sy loharanon-karena ara-kolontsaina. Tamin'ny Aprily 26 1938 ny faritra dia sokajiana ho toy ny firenena tsangambato sy Etazonia ho toy ny Biosphere Reserve amin'ny UNESCO any 1976. Farany, ny toerana dia sokajiana ho toy ny valan-javaboary ao amin'ny 5 Martsa 1980. (Wikipedia)
Fandrakofana faritra ny toerana manodidina (mena) sy ny ICAO Laharana ny seranam-piaramanidina